Israely · Janoary, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Israely · Janoary, 2019
Tantara mikasika ny Israely tamin'ny Janoary, 2019
Ejipta: Libaney iray any Ejipta – Avy amin'ny Fibodoana mankany amin'ny Fanafahana
Ejipta 20 Janoary 2019
Indray andro, nahatsiaro ho afa-baraka izy, ary ny andro taorian'izay, nahatsiaro ho afaka. Izany no tantaran'i Layal El Katib, bilaogera Libaney iray nipetraka tany Ejipta nandritra ny fotoana naharitra, nentin'i Tarek Amr ho antsika.
Afrika Mainty 17 Janoary 2019
Israely: Nankatoavin'ny rehetra ny volavolan-dalàna momba ny sivana
Mediam-bahoaka 12 Janoary 2019
(Marihina fa tamin'ny volana Jolay 2007 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Ny volavolan-dalàna momba ny sivana ho an'ny aterineto vetaveta sy feno herisetra izay natolotr'i Amnon Cohen avy amin'ny antoko Ortodoksa Hiringiriny Shas dia neken'ny Komity Ministerialy misahana ny Famolavolana Lalàna ary natolotra ny Knesset Isiraeliana.
Ejypta: Fihaonambe ara-pinoana sy ny fifandraisana Arabo-Isiraeliana
Arabia Saodita 04 Janoary 2019
Sambany nipetraka tamin'ny efitrano iray niaraka tamin'ireo mpitondra ara-politika Israeliana ny mpanjaka Saodiana Abdullah, nandritra ny fihaonambe "ara-pinoana" karakarain'ny Firenena Mikambana, natao tao New York, Etazonia.
Marobe ny fiarahabana ny mpanjakavavy Rania noho izy nahazo ny Loka “Visionary” Youtube
Jordania 04 Janoary 2019
Miondrika manaja ny Mpanjakavavin'i Jordania, Rania, sy ny hetsika fanentanany ao amin'ny YouTube, ireo bilaogera avy any Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra, taorian'ny nahazoany ny loka tamin'ny Loka Visionary YouTube noho ny fananganana fantsom-pifandraisana an-tserasera hiadiana amin'ny fitsarana an-tendrony sy ny hevi-diso mikasika ny Arabo sy silamo.